Tronsmart MEGA Portable Speaker , Bluetooth Speaker , Wireless Speaker – Remax Online Shop
Tronsmart MEGA Portable Speaker , Blu...
Tronsmart MEGA Portable Speaker , Bluetooth Speaker , Wireless Speaker , Desktop Speaker , Portable Speaker , Mini Bluetooth Speaker , wireless speaker for Phone , Computer , Music ,iPhone , iPad , Tablet , Bluetooth Speaker with SD Card, Aux
Black - K110,000.00
Tronsmart MEGA Portable Wireless Speaker
i! SoundPulse™ Technology နဲ့ အသံထွက်ပိုင်း ကို
Output #40W ထိ ထုတ်ပေးထားတယ် i!
i! နောက်ဆုံး ထွက် Bluetooth Version 5.0 ချိတ်ဆက်မှု ကြောင့်
(ပေ 100) ပတ် လည်ကို အကြိုက် ဖွင့်လို့ရမယ် i!
i! Element Mega စပီကာ၂ လုံး ကို (TWS) True Wireless Stereo
ကြိုးမဲ့ ချိတ်ဆက် စနစ် ပါသေးတာမို့ ဘော်ဒါတွေ ဆုံရင်
ပွဲ အမြဲတမ်း ဖြစ်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ လုံးဝ ကွက်တိပါ i!
i! Tronsmart ရဲ့ Element Mega က Touch Screen ဖြစ်တဲ့ အပြင်
#NFC system ပါသေးလို့ ဖုန်း ကို စပီကာ Screen ပေါ် ထိလိုက်တာနဲ့
သီချင်းတွေ အလွယ်တကူ ဖွင့်လို့ရသေးတယ် i!
Battery Capacity 6600mAh x